Ny angano an-tanandehibe mamorona indrindra amin'ireo firenena 50 Fizarana 10
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny angano an-tanandehibe mamorona indrindra amin'ireo firenena 50 Fizarana 10
Vaovao Mahafaly Fialam-bolyHafahafa sy tsy mahazatra
by Waylon Jordan Janoary 18, 2021
nosoratan'i Waylon Jordan Janoary 18, 2021
Tena nahatratra ny faran'ny diantsika an-tanàn-dehibe namakivaky an'i Etazonia ve isika ?! Ataoko fa manana isika. Saika sarotra ny hino azy io, saingy eto izahay miaraka amin'ireo fanjakana dimy farany amin'ny làlan-tsoratray ary manantena aho fa nahafinaritra anao ny namaky azy ireo rehefa nanoratra momba azy ireo aho.
Ankehitriny, fotsiny satria ny toko farany amin'ity dia ity dia aza manary toky! Ireny dimy farany ireny dia mitovy tsara amin'ny voalohany ihany, ary na dia tsy any amin'ny fanjakana aza izahay, dia tsy fantatrao mihitsy izay ho alehantsika manaraka!
Inona ny angano an-tanàn-dehibe tianao indrindra? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra!
Sary tamin'ny alàlan'ny Flickr
Niandry ela be aho vao tonga tany Virginia mba hahafahako miresaka momba ny Bunnyman. Nahaliana ahy tanteraka ilay tantara. Izy io dia angano marina an-tanàn-dehibe, nateraka tamina tranga roa tamin'ny taona 1970, izay niaina fiainam-pitiavan'ireo mpitantara, mpamorona sarimihetsika, mpanakanto ary mpitendry mozika azy manokana.
Tany no nanombohany tany Burke, Virginia:
Tamin'ny 19 Oktobra 1970, nipetraka tao anaty fiara nijanona ny Cadet Robert Bennett Academy Cadet Robert Bennett sy ny fofombadiny raha nisy lehilahy niakanjo akanjo bitro fotsy tonga nihazakazaka nivoaka avy tao anaty hazo niaraka tamin'ny satrokely niantsoantso azy roa lahy hoe: fananako ary manana ny nomeraon-tago aho! ”
Nanohy nanipy ny satroka tamin'ny fiara ilay lehilahy, izay namaky teo am-baravarankely ary niantsona teo amin'ny solaitrabe rehefa nikoropaka nandroaka i Bennett. Nikiakiaka tamin'izy ireo ilay lehilahy rehefa nitsoaka izy ireo alohan'ny niverenany tany anaty ala.
Folo andro taty aoriana tamin'ny 29 Oktobra, Paul Phillips, mpiambina mpiaro ny asa fanorenana dia nahita lehilahy nanao akanjo bitro fotsy sy mainty ary fotsy. Phillips dia nahita fijery tsara kokoa tamin'ilay nanafika, nilaza azy sahabo ho 20 taona, 5'8 ″ ary somary mahia. Nanomboka nanantona famaky teo am-baravarana fidirana ilay lehilahy niantsoantso hoe: “Manitsakitsaka ianao. Raha manakaiky kokoa ianao dia hotapahiko ny lohanao. ”
Ny polisy Fairfax County dia nanokatra ny famotorana momba ireo tranga ireo, izay nikatona avokoa ny roa tonta noho ny tsy fisian'ny porofo.
Ampy izay ny nanetsika ny eritreritry ny mponina.
Ny zava-nitranga manaraka dia ny volamena an-tanàn-dehibe. Vetivety dia nanomboka nitombo ny tantara momba an'i Bunnyman miafina sy ny niandohany ary koa ny antony nanosika azy.
Ny tantara iray toy izany dia niverina tany amin'ny 1904 raha nisy marary roa nanalokaloka nandositra tany anaty ala akaikin'ny faritra. Vetivety dia nahita fatin-bitro efa nihinana antsasaka ny mponina. Farany, ny iray tamin'izy ireo dia hita nihantona avy teo amin'ny Bridge Bridge Fairfax niaraka tamin'ny satroka tsy misy kilema, vita tamin'ny tanany ary noheverin'ny tompon'andraikitra fa tapitra ny fisehoan-javatra hafahafa. Saingy, noho ny fatin'ireo bitro be dia be, dia vetivety dia nazava fa ilay afa-nandositra kosa dia mbola afaka madiodio.
Ankehitriny, hoy izy ireo, mbola manenjika ny faritra i Bunnyman, mampihorohoro ny mponina ary manantona ireo niharany teo amin'ilay tetezana iray ihany rehefa nanakaiky ny Halloween. Mazava ho azy, tsy mbola nisy porofo an'izany, fa tsy manakana ny ray aman-dreny tsy hampitandrina ny zanany hitandrina amin'ny Halloween izany sao ho lasa rembin'ny Bunnyman izy ireo.
Ity dia andiany iray monja amin'ireo tantara nipoitra nanodidina ilay olon-dratsy malaza, ary mahavariana ahy fa toa nipoitra tamin'ny tranga roa tamin'ny taona 1970 izy rehetra nataon'ny lehilahy iray toa tezitra tamin'ny fananganana tanàna manodidina. ao amin'ny faritra.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Bunnyman ianao dia tena amporisihiko ny lahatsoratr'i Jenny Cutler Lopez hoe "Ho ela velona ny Bunnyman" avy amin'ny Gazetin'i North Virginia nanomboka tamin'ny 2015. Manarona ireo tranga niseho tany am-boalohany izy io nefa koa mandeha amin'ny fomba nitomboan'ny lore manodidina ny Bunnyman.
Washington: Maso mamirapiratra ao amin'ny lisea Mariner
sary avy yhiae ahmad avy amin'ny pixabay
Ny Mariner High School any Everett, Washington dia mitovy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa any amin'ny firenena afa-tsy amin'ny antsipiriany kely iray ihany. Na dia tavela eo aza ny jiro sasany ao an-tsekoly mandritra ny alina toy ny hafa rehetra, amin'ny alina sasak'alina tokony ho sasakalina dia hiposaka ny jiro ka hidina ao anaty haizina.
Rehefa mitranga izany, hoy ny mponina sasany, dia afaka mahita maso mamiratra mamiratra mamirapiratra avy ao amin'ny haizin'ny sekoly ianao. Inona koa, hoy izy ireo raha mijery tsara ny masonao ianao, dia ho hitanao ny tarehin-dehilahy manao elatra ao an-tsekoly.
Mascot tsy ofisialy sy tsy ara-dalàna ve ity? Manatrika kilasy alina ve ny zandrin'i Mothman? Tsy misy olona azo antoka, fa hoy izy ireo fa afaka mahatsapa ny maso mijery anao alohan'ny ahitanao azy ireo, ary fa mahatonga azy io ho karazana mampilendalenda fotsiny ho an'ity lisitra ity.
Virginia Andrefana: ireo mpianatra tsy misy loha any amin'ny faritr'i Monongalia
Ity angano an-tanàn-dehibe ity dia iray hafa izay nitaona ny tranga tamin'ny tranga famonoana olona nahafaty olona tamin'ny volana Janoary, 1970. Mpiara-miasa roa, Mared Malerik sy Karen Ferrell, no nanandrana nitifitra rehefa avy nandao ny sarimihetsika tamin'ny alin'iny alina iny. Tsy hita intsony izy ireo mandra-pahatongan'ny fatin'izy ireo efa maty notapahina tao anaty ala volana vitsivitsy taty aoriana.
Nihorohoro ara-drariny ny mponina tao an-toerana, ary rehefa afaka dimy taona dia mbola tsy voavaha izany mandra-pitan'ny lehilahy iray atao hoe Eugene Clawson niaiky fa nisy ny vono olona nataony. Ity anefa no zavatra. Na dia tsy azo lavina aza i Clawson fa lehilahy ratsy fanahy - voaheloka koa izy tamin'ny fanolanana zazavavy kely 14 taona - ny ankamaroan'ny olona dia tsy nieritreritra fa tena meloka tamin'ny famonoana ireo tovovavy roa voarohirohy ireo.
Ny podcast, ny famotopotorana, ary ny boky hatramin'ny fotoan'ny fisamborana sy fanamelohana an'i Clawson no anton'ity raharaha ity, ary saika tsy misy mieritreritra fa tena nanao an'io asa ratsy io izy.
Ka iza no nanao? Isaky ny mpanadihady dia misy ahiahiana hafa, ary tena sarotra ny milaza azy.
Ny fantatsika dia nanomboka tamin'io fotoana io dia niely ny tsaho sy ny tatitra momba ny fahitana vehivavy roa tsy nanan-doha nanerana ny làlana izay nahitana an'i Mared sy Karen farany. Raha ny marina, mihoatra ny iray ny lozam-pifamoivoizana no voadona amin'ireo famafitaka mpanelingelina ireo mpamily.
Mahatsiaro ny fotoana faran'izy ireo ve ireo fanahy ireo sa angano an-tanàn-dehibe entin'ny loza mba hampitandremana ny tanora amin'ny loza ateraky ny fitsangantsanganana?
sary avy lea manantena bonzer avy amin'ny pixabay
Làlana manirery manakaiky an'i Dodgeville, Wisconsin no fonenan'ny filokana mampatahotra izay heverina fa fanahin'ireo mpirahalahy roa maty tamina ady tany amin'ny bar tamin'ny taona 1840.
Hatramin'io fotoana io, heverina fa nandritra ny 40 taona dia niverina ilay phantom. Ny tena manaitra indrindra an'ity tantara an-tanàn-dehibe ity dia ny singa miova endrika ny fanahy. Amin'ny fotoana samihafa, ny Ridgeway Ghost dia hita ho toy ny biby toy ny alika sy ny kisoa ary koa ny endrika lehilahy sy vehivavy ary koa baolina lehibe. Farafahakeliny tatitra iray dia nisy mpitaingin-tsoavaly tsy nanan-doha.
Ny olona sasany ao an-toerana dia miantso ny fahitan'ny phantom ny asan'ny pranksters, fa ireo izay efa niaina izany tranga izany dia hilaza aminao raha tsy izany.
Wyoming: Ny sambon'ny fahafatesan'ny reniranon'i Platte Avaratra
sary avy enzol avy amin'ny pixabay
Minono aho a sambo tsara tantara…
Hatramin'ny taona 1860, nisy sambo mpitondra zava-miafina iray voalaza fa manamorona ny Reniranon'i Platte Avaratra any Wyoming. Mipoitra ao anaty banky zavona io amin'ny mitataovovonana - rehefa tsy misy izany zavatra izany matetika- ary mipoitra avy eny amin'ny aloka, rakotra fanala miaraka amina ekipa matoatoa eo an-tokotaniny.
Ny tena mampatahotra indrindra amin'ity sambo ity dia ny filazany fa niseho alohan'ny nahafatesan'ny olona iray. Ankoatr'izay, nilaza izy ireo fa hahita ny fisehoan'ilay olona voatendry ho faty eo ambonin'ny tokotanin-tsambo ianao, rakotra fanala toy ny sisa amin'ny ekipa.
Betsaka ny tantara momba ny Sambo Fahafatesana, fa ity iray voarakitra ao amin'ny Only In Your State ity no zaraiko:
Maherin'ny 100 taona lasa izay, mpanafika iray antsoina hoe Leon Webber no nitatitra ny fihaonany tamin'ilay sambo misy entona. Tamin'ny voalohany, baolina zavona goavambe no hitany. Nihazakazaka nankeny amoron'ny renirano izy mba hijery akaiky kokoa ary nanipy vato tamin'ny volotara aza. Avy hatrany dia naka ny sambo mandehandeha izy io, andry sy lay an-tsambo voasaron'ny volom-bolafotsy, manjelanjelatra.
Webber dia nahita tantsambo maromaro, voasaron'ny fanala koa, nifanety tamin'ny zavatra nandry teo ambonin'ny tokotanin'ny sambo. Rehefa lasa izy ireo mba hanehoana azy ny fomba fijery mazava dia gaga izy nahita fa fatin-jazavavy nojeren'izy ireo. Rehefa nijery akaiky kokoa izy dia fantatry ny mpamadika fa fofom-badiny izy. Alao an-tsaina ny fahatairany rehefa niverina nody izy iray volana taty aoriana mba hahalala fa maty ny malalany tamin'io andro io hitany ilay fisehoana nampatahotra.
Ho an'ny maro amin'ireo tantara ireo avy amin'ny, KITIHO ETO.
Eny… izay ihany. Nosaronanay ny angano an-tanàn-dehibe mampatahotra ahy avy any amin'ny fanjakana 50 ao Etazonia. Tianao ve ny tianao? Nisy olon-kafa tianao ve? Ampahafantaro anay ny hevitrao etsy ambany!
Urban LegendUrban LegendsVirginiaWashingtonWaylon JordanWest VirginiaWisconsinWyoming
Waylon Jordan dia mpankafy tantaram-piainana andian-tsarimihetsika ary sarimihetsika indrindra ireo izay manana singa mihoatra ny natiora. Mino tanteraka izy fa ny horohoro dia taratry ny tahotra iraisan'ny fiaraha-monina ary azo ampiasaina ho fitaovana amin'ny fanovana ara-tsosialy.
Tranofiara vaovao ho an'ny "Dreamcatcher" dia fihorakorahana ao anaty haizina
Mampientanentana sahady ny fijerin'ny Marvel 'Alien'